सुन्दर ओठ र गालामा डिम्पल कसरी बनाउने ? – Jagaran Nepal
सुन्दर ओठ र गालामा डिम्पल कसरी बनाउने ?
कस्तो ओठ सुन्दर ? यसको ठ्याक्कै उत्तर डाक्टरसँग पनि छैन । तर, युवतीहरू भने आफ्नो ओठ ‘सेक्सी’ देखिने बनाइमाग्न डाक्टरकोमा धाइरहेका छन् । वर्तमान समयमा सौन्दर्य मानक सुन्दर हिरोइनहरू भएकाले ‘फलानीको जस्तो’ भनेर युवतीहरू डाक्टरलाई क्ल्यू दिन्छन् र डाक्टरले ठूलो भए सानो र सानो भए ठूलो बनाइदिन्छन् । चिटिक्क मिलाइदिन्छन् । यसलाई ‘लिप इन्ह्यान्समेन्ट’ भनिन्छ ।
पातलो ओठलाई ‘फिलर्स’ राखेर ठूलो देखाउन सकिने हुन्छ । ओठमा राखिने ‘फिलर्स’ मानव शरीरमा पाइने एक प्रकारको तत्वबाट बनाइने भएकाले यसले कुनै असर नगर्ने र नेचुरल लुक दिने डाक्टहरु बताउँछन्।
भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र प्रियंका चोपडाले ओठको सर्जरी गरेर आफूलाई झन् सुन्दर तुल्याएको कुरा चर्चाका विषय बन्छन्। प्राकृतिक रूपमै डिम्पल पाएकी अभिनेत्री प्रिटी जिन्टाजस्तै बन्न चाहने युवतीहरू थुप्रै छन्।
‘डिम्पल क्रिएसन’ नाम दिइएको यो सर्जरी विशेष गरी मोडलिङ वा अभिनयलाई करिअरका रूपमा अघि बढाउन चाहने युवतीले गरिरहेको बताइन्छ । युवतीको गालामा हुने डिम्पललाई सौन्दर्यको एउटा मानक मानिने र धेरै महँगो समेत नपर्ने भएकाले धेरै युवतीले डिम्पल बनाउन चाहने गरेको डाक्टरहरू बताउँछन्।
पछिल्लो समय चिउँडोको आकृति बदल्ने ‘चिन काउन्टरिङ’, कानका लागि ‘इअर रिफ्रेसिङ’ गर्न चाहने पनि कस्मेटिक सर्जरी सेवा उपलब्ध हुने अस्पतालहरूमा धाइरहेका छन्।